Sir Alex Ferguson ayaa isku dayaya inuu cadaadiso dalabkiisa 20ka milyan ginni ee Robin van Persie uu ugu dhaqaaqayo Old Trafford. Ferguson ayaa ku niyadsan inay ka kor mari doonaan caqabado kasta oo ka soo wajaha doonista weeraryahanka Netherlands inuu noqdo ciyaaryahan United ah ka hor inta uusan bilaaban horyaalka Premier League. (The Independent)
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa aaminsan in saxiixyada ay kooxda sameyneyso xagaagan inay ka dhaadhicin karto Robin van Persie inuu kooxda iska sii joogo. Tabbaaraha Arsenal ayaa ugu yaraan doonaya inuu ku xero iibka ciyaaryahanka 20 milyan ginni, iyadoo kooxaha doonaya aysan weli sarre u qaadin dalabkooda inkastoo dalabkoodii hore laga soo wada diiday. (The Daily Mirror)
Manchester City ayaa isku diyaarineysa inay 20 milyan ginni ku dalbato daafaca kooxda Liverpool Daniel Agger, iyagoo ciyaaryahanka reer Denmark u soo bandhigaya mushahar uu isbuucii ku qaadanayo 100 kun ginni. (Goal)
Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay ka fiirsaneyso inay dalbato weeraryahanka Olympiakos Kevin Mariallas, iyadoo sugaya waxa ka soo bixi doona xaalada Robin van Persie. (Daily Mail)
Chelsea ayaa isbuucaan sarre u qaadi doonta doonisteeda ay ku dooneyso inay ciyaaryahano ku soo kordhiso daafaceeda iyo weerarkeeda, ka hor inta ayan Community Shield la ciyaarin Manchester City axada soo socota. Iyadoo weli xiiseyneysa weeraryahanka Porto Hulk, hadana heshiis kasta oo la gaara ayaa ah mid qasan oo adag madaama ciyaaryahanka ay qeyb ka leeyihiin rag kale, taasoo ka dhigeysa in xiddiga Wigan Victor Mosses inuu noqdo ninka ay u badan tahay inuu kooxda yimaado isbuucaan. (The Guardian)
Daafaca kooxda Chelsea Ashley Cole ayaa meesha ka saaray inuu u dhaqaaqayo kooxda boorsada weyn ee dalka Faraniiska ee Paris Saint-Germain ka dib markii uu sheegay inay haatan bilowdeen wadahadalo uu heshiiska ugu cusbooneysiinayo Chelsea. (Daily Mail)
Roberto Mancini ayaa qirrty in looga badiyay tartanka saxiixa ciyaaryahankii diirada u saarnaa xagaagan Robin van Persie. Tababaraha kooxda Manchester City ayaanse weli rajo dhigin waxaana uu isku dayayaa kabtanka Arsenal oo maanta 29 sanno jir ah inuu la soo wareego ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga dhamaadka bishaan. (The Sun)
Malaga ayaa xaqiijisay inay ciyaarahanka garabka ka ciyaara Santi Cazorla uu ka tagayo kooxda. Cazorla ayaa khamiistii hore tijaabada caafimaadka u maray Arsenal. (The Times)
Tababaraha Tottenham André Villas-Boas ayaa xalay sheegay inuu isku diyaarinayo xilli ciyaareed uu ka maqan yahay kooxda Luka Modric, lakiin waxa uu ka digay inaysan lacag raqiis ah ciyaaryahanka ku siin doonin Real Madrid. Real Madrid ayaa ciyaaryahanka ku soo dalbatay lacag ka yar lacagta 40ka milyan ginni ee ay Tottenham dooneyso. (The Times)
Ciyaaryahankii diirada u saarnaa Tottenham Salomon Rondon ayaa ka tagay kooxda dhaqaale ahaan dhibaatooneysa ee Malaga isagoo ku biiray kooxda reer Russia ee Rubin Kazan. 22 jirkaan reer Venezeula ayaa si aad ah loola xiriirinayay xagaagan inuu u dhaqaaqayo White Hart Lane.
Weeraryahanka xulka Wales iyo kooxda Liverpool ayaa la filayaa inuu bilowga isbuucan tijaabada caafimaadka u maro kooxda Cardiff City, ka hor inta uusan si rasmi ah uga soo dhaqaaqin Liverpool. (The Times)
Napoli ayaa u muuqata inay ugu cadcadahay saxiixa Aly Cissokho ka dib markii kooxda Talyaaniga ay ku soo biirtay tartanka daafaca bidix ee Lyon kaasoo lagu qiimeeyo 8 milyan ginni. Ciyaaryahanka Faransiiska oo 24 jir ah ayaa xiiseynaya inuu u dhaqaaqo England, iyadoo ay isha la raacayaan Newcastle iyo Tottenham. (The Times)
Queens Park Rangers ayaa lala xiriiriyay Andrey Arshavin, iyadoo ciyaaryahanka uu gelayo sannadkiisii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa. Kooxda Zenit ayaa iyadana ka soo horjeesatay inay si joogta ah u la soo wareegaan kabtanka Russia ka dib markii uu amaah ahaan ugu ciyaaray xilli ciyaareedkii hore.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa u muuqata inay kaga adkaatay kooxaha Inter Milan iyo Manchester United saxiixa Lucas Moura ka dib markii ay u soo bandhigeen kooxda Sao Paulo 45 milyan euro, iyagoo doonaya inay ciyaaryahanka la wareegaan bisha Janaayo, madaama haatan uu ka buuxsamay intii loo ogolaa ciyaartoyda aan heysan baasaboor yurub inay u ciyaaraan. (Football Italia)
Kooxda Bianconeri ayaa dooneysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Inter Milan Giampolo Pazinni kaasoo la filayo inuu xagaagan ka tagayo kooxda Inter, waxaana ay Nerazurri u soo bandhigayaan oo ay kala xajoonayaan inay bedelkiisa qaataa Fabio Quagliarella. (Gazzetta dello Sport)
Iyadoo Juventus ay cabsi weyn ka heyso in ganaax dheer uu muteysto daafaceeda dhexe Leanardo Bonucci oo ku eedeysan sharad sharci darro markii uu joogay Bari ayaa waxa ay raadineysaa bedelkiisa, waxaana ay doonayaan inay kooxda Zenit ee dalka Ruushka kala soo wareegaan daafaca reer Portugal Bruno Alves. (Gazzetta dello Sport)
Kooxda Inter Milan ayaa u muuqata inay dhibaato kala kulmeyso saxiixa ciyaaryahanka Lucas Moura. Iyadoo Manchester United iyo Paris Saint-Germain ay sarre u qaadeen dalabkooda. (Gazzetta dello Sport)
Daafaca reer Brazil ee Inter Maicon ayaa lagu wadaa inuu u dhaqaaqo kooxda Faransiiska ee Paris Saint-Germain, waxaana ay Inter u aragtaa in hadii ay ku guuleystaan iibkiisa inay dhaqaale ay ciyaartoy kale ku soo iibsan karaan ay ka soo saari karaan halkaas. Maicon ayaa aad loola xiriirinayaa inuu xagaagan ka tagayo Nerazzurri. (Gazzetta dello Sport)
Iyadoo Sabtida ay Juventus iyo Napoli isaga horimaanayaan koobka Super Cup ayaa hadana waxa ay sidoo kale ku dagaalamayaan suuqa kala iibsiga, Juventus ayaa dooneysa inay ka dulqaado Napoli daafaca bidix ee kooxda reer Belgium Gent Wallace. (Corriere dello Sport)
Weeraryahanka Manchester City Edin Dzeko ayaa u sheegay AC Milan inuu haatan sii joogayo City, balse weli laga yaabo inuu dhankooda u soo wareego ka hor dhamaadka suuqa kala iibsiga ee xagaagan. (Corriere dello Sport)
Juventus ayaa loo sheegay in lacag fiican la timaado hadii ay dooneyso daafaca dhexe ee kooxda Caglairi Davide Astori, kaasoo ay Cagliari ku dooneyso 8 milyan euro iyo inay la wareegto ciyaaryahan ku jira da’ yarta Bianconeri. Lakiin Juve ayaa dooneysa inay marka hore aragta halka uu ku danbeeyo xaalada Bonucci ka hor inta aysan go’aan gaarin. (Tuttosport)
AC Milan ayaa rajo fiican ka qabta inay xagaagan ku guuleysan doonto saxiixa labo ciyaaryahan oo AC Milan ah, Ricardo Kaka iyo Lassana Diarra, waxaana Milan ay haatan kala xaajooneysa Real saxiixa kubadsameyahoodii hore.(Tuttosport)
Inter Milan ayaa u aragta ciyaaryahanka reer Uruguay ee kooxda Napoli Walter Gargano ciyaaryahan ay ku xoojin karaan qadkooda dhexe. (Tuttosport)
Daafaca bidix ee kooxda Real Madrid Fabio Contaroa ayaa doonaya inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore Benfica, xitaa hadii uu lacag badan ku weynayo sidaas, waxaana la sheegayaa in ciyaaryahanka uu u dulqaadan la’yahay eedeymaha kaga imaanaya taageerayaasha Real Madrid ee la xiriirta qaab ciyaareedkiisa. (Marca)
Kooxda Valencia oo suuqa ugu jirta daafac garabka ka ciyaara ayaa dooneysa ciyaaryahanka koxoda Sporting Lisbon Emiliano Insua, iyadoo doonaya inu ku xoojiyaan daafacooda bidix. (Marca)
Wakiilka ciyaaryahanka Ibrahim Afellay ayaa sheegay in laga yaabo in ciyaaryahanka reer Holland uu hal xilli ciyaareed kale sii joogo kooxda Barcelona. (AS)
Kooxda Athletic Bilaboa ayaa ku dhibtooneysa inay heshiis cusub ka saxiixdo weeraryahankeeda Fernando Llorente kaasoo qandaraaskiisa uu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda, waxaana lagu soo waramayaa in Man United ay qorsheyneyso inay xagaaga soo socda si bilaasha kula soo wareegto marka qandaraaskiisa uu dhaco. (AS)
Barcelona ayaa ku sii dhawaaneysa saxiixa ciyaaryahanka reer Kaamiruun ee kooxda Arsenal Alex Song iyagoo doonaya inay wadahadalo la furtaan kooxda Gunners. (Sport)